Lenovo Thinkpad X1 Tablet ukubuyekeza - Izindaba Rule
Lenovo Thinkpad X1 Tablet ukubuyekeza
isihenqo Omkhulu, umklamo eyizingqabavu, ikhibhodi ekhaliphile Thunderbolt 3 ukwenza oyisizukulwane sesithathu ThinkPad X1 Tablet inhlanganisela eyingozi
Lesi sihloko osesikhundleni “Lenovo Thinkpad X1 Tablet ukubuyekeza: kwafana Surface Pro kodwa-USB C” kwalotshwa Samuel Gibbs, I-theguardian.com ngoLwesine 11 Okthoba 2018 06.00 UTC
Lenovo sika oyisizukulwane sesithathu ThinkPad X1 Tablet uhlose ukuba Windows akukho-ebucayini 10 detachable enikeza abasebenzisi yini Surface Microsoft ngeke: USB C Thunderbolt 3.
Ifomu isici ajwayelekile. I-computer langempela isibambo ku-tablet 8.9mm obukhulu kickstand out umhlane ikhibhodi ngokudonseka enamathiselwe ukuthi ihlala phezulu engela ukuze ukuthayipha kangcono.
Kodwa lapha Lenovo isuka yokuwina Surface minimalist 2-ku-1 ifomula, ngokuletha ThinkPad ukudla ezifana ingono ezikhomba, isiqeshana sokuhambisa iminwe izinkinobho, ebhakedeni emise ikhibhodi okhiye 4G ozikhethela umgwaqo-iqhawe ziyakhanga.
Lokho akusho lena workhorse okumsulwa, kodwa matt-black upende umsebenzi, ThinkPad logo futhi abomvu avelele lasendulo ezibukeka ngokuqinisekile enikeza umbono lo mshini imayelana ukwenza izinto zenzeke.
Isikrini 13in likhulu kuno uzothola phezu surface Pro futhi Eva V, futhi eyenza kube lula ukusebenzisa solo njengendlela laptop. Isikrini ngokwawo pin-abukhali, agqamile nje mayelana elikhanyayo ngokwanele ukusebenzisa ngaphandle. Ama-Movie abonakala amahle ke, nge-engeli ezinhle wokubuka, futhi ngenkathi bezels emhlabeni ngaphandle kukhona mikhulu, bona ihlanganise izipikha ezimbili ebheke phambili, isithwebuli zeminwe kanye Windows Sawubona-uhlelo ukuqashelwa ubuso IR inikwe amandla.
I kickstand kufana ukuthi phezu Pro Surface futhi kude ikhambi kangcono propping i-tablet detachable, noma ngokwayo noma exhunywe kwi ikhibhodi. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
On the emuva kuyinto kickstand okuqinile-umuzwa nge-engeli ebanzi motion, okuyinto nje kwafana ukuthi ngemuva Pro Surface, futhi ilungele kokuthola engela kwesokudla ethangeni lakho noma edeskini.
Izikhulumi ebheke phambili mhlawumbe iphuzu ababuthakathaka ngokusebenzisa X1 Tablet njengoba umshini abezindaba, ngoba nakuba zinezikhwepha kuqhathaniswa kucacile futhi ukuhlanekezela-free, bayazivikela futhi omkhulu futhi bengenalo noma yiluphi uhlobo lokuthokoza bass. Zizoba emihle uma uku ngesandla ebambe umshini ukubukela umdlalo we-TV, kodwa ukubukela into ngenkathi ukupheka nokuzwa ukuthi kwenzekani phezu fan extractor kuyinto ezingo-alubhadwa.
I-Tablet X1 iklanyelwe ukuba okuhlala isikhathi eside kunabaningi. Isikrini ehlanganiswa uyibhala Gorilla Glass, like iningi mncintiswano, kodwa umugqa ThinkPad inomlando uya elinye imayela ekuhloleni ngokumelene nomswakama, vibration futhi ukudledlezela, okusho ukuthi kufanele ubhekane nezingcindezi jolts kwansuku zonke futhi jostles of beya.
Screen: 13e QHD + LCD
Amagama: Intel isikwele-core Core i5 noma I7 (8isizukulwane th)
RAM: 8 noma 16GB
Isitoreji: 256, 512GB noma 1TB SSD
Isistimu esebenzayo: Windows 10 Ekhaya noma Pro
Ikhamera: 8ILUNGU LEPHALAMENDE bakhulise, 2ILUNGU LEPHALAMENDE ebheke phambili
Ukuxhumana: Wifi ac, Bluetooth 4.1, 2x Thunderbolt 3 (USB-C), headphones, TPM, I-microSD, ukuqashelwa ebusweni, zeminwe Enani, ozikhethela nano sim kanye NFC
Ubukhulu: 304.1 x 226 x 8.9mm (15.1mm ne ikhibhodi)
Isisindo: 890g (1,270g nge ikhibhodi)
High-ekupheleni ukusebenza ultraportable
Ithebhulethi nekhibhodi ngesankahlu kanye nozibuthe. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Umngani wami omkhulu uX uchungechunge top-ekupheleni ThinkPad umugqa Lenovo sika, okusho ukuthi Tablet X1 iza nazo zonke amandla uku cishe ufuna.
Lokho kuhlanganisa owukhethayo yakamuva lwesishiyagalombili-isizukulwane isikwele-core Intel i5 noma I7 processor, 8 noma 16GB we-RAM esiningi.
Umshini njengoba ihlolwe waba processor yesihlanu Core i7-8550U, 16GB RAM of, 512GB wesitoreji ne-4G, futhi ngokuphelele ukundiza siphume phakathi kwezintaba konke ngaphonsa kulo.
Ngenkathi okuhlangene Intel UHD 620 ihluzo ikhadi kungase kube iphuzu umpofu we-Tablet X1, umshini wakwazi ukusingatha eminye imifanekiso ububanzi 23.000-pixel ezinkulukazi ngaphandle kokuphula kwanje of umjuluko.
I nabalandeli ithebhulethi nomlilo up izikhathi ezingaphezu ezinye izimbangi, kodwa futhi ungatholi ikakhulukazi elikhulu ngaphandle wenza okuthile kakhulu processor khudlwana. Esikhathini esiningi bengekho inaudible endaweni ehhovisi.
ukusebenza sekukonke kuyinto enhle kakhulu, afanayo elingamazi ephezulu umshini ultraportable, kodwa ungalindeli ukwenza amageyimu hardcore kuso - angizange uyizame semifanekiso ikhadi yangaphandle.
I matt black ubukeka kancane zibuthuntu, kodwa uzizwa like it uzoba simelane imihuzuko futhi kahle scuff. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Enye yezinto lokho babehlaba amaphilisi kakhulu PC impilo yebhethri. Lenovo ucaphuna ukuphila "ngaphezulu kunokuba-usuku lonke" ibhethri amahora ayisishiyagalolunye-futhi-a-nesigamu, kodwa empeleni kuyinto Tablet ThinkPad X1 sithatha amahora kuphela emhlabeni eziyisikhombisa phakathi amacala. Lokho kwaba njalo "ukuphila kwebhetri Engcono" amandla ukubeka asebenzayo, ukusebenza amagama e Typora, ukuphequlula ku-Chrome, usebenzisa Nextgen umfundi, abanye ukuhlela isithombe Affinity Photo futhi eziningi imeyili ku Microsoft Mail.
Kuyinto ngokwanele ukuze uthole ngokusebenzisa kakhulu komsebenzi wosuku, kodwa akwanele ukushiya ishaja ekhaya ngezinsuku olunzulu. Kuyajabulisa njengoba isebenzisa USB Amandla Delivery ukukhokhisa i, iyiphi ishaja-USB C wattage okwanele okufanele asebenze njengalezo ezithunyelwa nabanye laptops noma ngisho multi-amashaja esidlangalaleni 30W noma ngaphezulu.
Thunderbolt 3 namachweba ngenhloso
amabili Thunderbolt 3 namachweba ngenhloso, a Kensington Ilokhi slot kanye ugqoko sim kukonke uhlangothi. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I-Tablet X1 iza ezimbili nje Thunderbolt 3 namachweba kabili njengoba USB C nezimbobo. Ukuba Thunderbolt 3 kuyinto iyisibusiso omkhulu njengoba amakhono ukunwetshwa akupheli, kuhlanganise grail ongcwele eyodwa intambo ukushaja, ukuxhuma 4K qapha nazo zonke ezinye izinto neuropathy ungacabanga. Kuyinto inzuzo enkulu phezu izimbangi angenazo ngisho USB-C.
Nokho, kokuba emachwebeni amabili kuphela, omunye okuzokwenza yadingeka amandla, kusho ukuthi ngeke bathembele echwebeni noma izikhungo. Akukona into enjalo enkulu kakhulu, kodwa kancane port-juggling akunakugwenywa uma ungenawo ukutshala Kudokhu oluthile.
Kukhona futhi umfundi microSD ikhadi, okuyinto enkulu, kodwa kufihlwe a sim-slot efana ukuthi lapho ungakuthola ku-smartphone. Akukona newusizo njengoba umfundi wememori khadi ashisayo-swappable njengoba udinga ithuluzi sim ejector ukuthola it out, futhi kusho Uyamkhipha u- le-4G sim uma uthola omunye ngesikhathi esifanayo.
Ikhibhodi kuyinto enhle kakhulu, futhi ingcono kakhulu kunanoma laptops kakhulu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngokungafani Microsoft Surface Pro, Tablet X1 iza ikhibhodi, futhi yini ikhibhodi kuba. Windows 10 detachables ezifana le bukhoma noma bafe ikhwalithi ikhibhodi, njengoba isikhathi esiningi uqamba like a laptop.
ikhibhodi Lenovo iyona engcono Ngisebenzise kunoma iyiphi detachable, futhi ingcono kakhulu kunanoma iningi laptops. I okhiye elisemhlanganweni egcwele, okuqinile, ukuzizwa okukhulu ngaphansi iminwe yakho futhi ube travel ezanele ukwenza i-ukhululekile, ezanelisayo ukuthayipha isipiliyoni.
I-trackpad muhle ngokulinganayo. Kuyinto pretty big, has a bushelelezi, ebusweni eqondile futhi ngokuchofoza okuqinile kuyo, kanye inala ongakhetha ukwenza ngezifiso isipiliyoni. Kodwa kukhona futhi nelimelela ThinkPad ngesimo omncane obomvu ingono TrackPoint phakathi G, H B okhiye, futhi abathathu igundane izinkinobho phakathi nesikhala kanye isiqeshana sokuhambisa iminwe. Ngathola ukusetshenziswa kancane ngabo ngaphandle uma isitimela lapho ukuphela ikhibhodi ukucindezelwa wenyuselwa esiswini sami yi zero legroom ekuvimbeni isiqeshana sokuhambisa iminwe.
Ikhibhodi ayinaye nezimfanelo ezingavamile zomunye yayo, ezifana ukhiye FN ngezansi ngakwesokunxele ekhoneni esikhundleni Ctrl, okuthile kwadingeka cishe ngokushesha ukushintshela round kuzilungiselelo ukuze imisipha inkumbulo ukuncishiselwa nokunamathisela. Azisekho okhiye abezindaba noma.
Isithwebuli izigxivizo zeminwe kancane isethi lingalingani up, kodwa isebenza kahle uma ungafuni ukusebenzisa uhlelo ukuqashelwa ebusweni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I-Tablet X1 ine IR ezisekelwe ebusweni ukubona uhlelo lokho nje kwafana ukuthi Surface umugqa Microsoft. Ikubona kusukela yokuvala isikrini futhi ngokuzenzekelayo ufake ngawe, okwenza ngemvume Seamless.
Kukhona futhi isithwebuli zeminwe, okuyinto has a inhlanganisela kancane obungavamile evunyelwe futhi ngokuswayipha ngokubhalisela zeminwe yakho, kodwa isebenza kahle osukwini-to-day ukusebenza. Angizange bagcina uyisebenzisa edeskini njengoba ukuqashelwa ubuso yasebenza kahle kangangokuba, kodwa kwaba wusizo uvula ithebhulethi lapho aphathwayo portrait, futhi kukho yebhayomethrikhi kulapho ngcono.
Ukuvula I-Tablet X1 luvule ikhibhodi kufanele hit inkinobho yamandla noma cindezela ikhi FN on the ikhibhodi
Uthola ukukhetha Windows 10 Ekhaya noma Pro
I ozikhethela ThinkPad Ipeni Ukugunda Pro ku ohlangothini mshini umnikazi detachable futhi isebenza kahle wokugubha phezulu noma ngemvume amadokhumenti
Uhlelo lokusebenza Lenovo Vantage enakekela umshayeli izibuyekezo izilungiselelo Bespoke kuya-Tablet X1 nge isikhathi sakugcina
I oyisizukulwane sesithathu Lenovo ThinkPad X1 Tablet iqala ngo £ 1.480 nge Core i5 processor, 8GB RAM of, 256GB wesitoreji kanye ikhibhodi temabhodlela ku- £ 2.422 nazo zonke izinketho.
Umshini njengoba ihlolwe abiza £ 1,973.59 nge Core I7 processor, 16GB RAM of, 512GB wesitoreji ne-4G.
Ukuze uqhathanise, Microsoft Surface Pro 6 uqala ngo £ 879, nenkambiso efanayo ontengo yakhe yayinqunyiwe kuya-Tablet X1.
I-Tablet ThinkPad X1 kufakazela ukuthi Lenovo ungenza omkhulu detachable 2-ku-1 se-Windows 10 ikhompyutha tablet. Akukona ezishibhile, kodwa inikeza Ukucaciswa ezifanayo noma ungcono imbangi wayo oyinhloko Microsoft Surface Pro, kuhlanganise eyayidingeka kakhulu Ukukhetha port yesimanje ye Thunderbolt 3.
I-Tablet X1 kunjani kungathatha eshaywe futhi bayosinda yonya zokusebenza mobile, okuyinto ukuthi lwenzelwe. Isikrini mkhulu, futhi ngesikhathi 13in kuyinto usayizi enhle, the kickstand futhi zekhibhodi ekhaliphile ukusebenza top-notch.
Ihora nesikhombisa ukuphila kwebhetri kungaba ngcono, kodwa 4G ihlanganiswe futhi ongakhetha ezimbili yebhayomethrikhi esifakwe wamukelekile. Kuba namanje umshini kangcono umsebenzi kuka play, kodwa muhle ngokwanele ukuba ukudonsa komsebenzi double ngaphandle bonke ufuna ukwenze amavidiyo iwashi kusuka phesheya ikamelo.
Uma use emakethe ukuba phezulu ekupheleni 2-ku-1 se-Windows 10 detachable, i-Lenovo ThinkPad X1 Tablet kufanele kube ohlwini lwakho.
Buhle: ukwakhiwa okuqinile, isihenqo ezinhle, ikhibhodi brilliant, Thunderbolt 3, 4G ozikhethela, umfundi microSD ikhadi, zeminwe Enani, ukuqashelwa ebusweni
Bawo: ezimbili kuphela-USB-C nezimbobo, umfundi microSD ikhadi hhayi kalula, ezibizayo
Dot obomvu 'i' sikhanya uma umshini ungaphakathi eceleni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Microsoft Surface Pro ukubuyekeza: cishe kakhulu cishe ikusasa Windows PC
Microsoft Surface Hamba ukubuyekeza: ithebhulethi ukuthi kungcono umsebenzi kuka play
Microsoft Surface Book 2 ukubuyekeza: onamandla kangako kodwa pricey laptop-tablet combo
Eva V ukubuyekeza: upstart Windows ithebhulethi kubasebenzisi amandla isethubeni elikhulu
← -Google Iqalisa-Pixel 3 Smartphone-Pixel Slate-Tablet Amazon uqala amanzi nemithi Kindle Paperwhite →